I-ILIFE A11, enye indlela enezici eziningi kanye nenani elihle [Buyekeza] | Amagajethi Ezindaba
UMiguel Hernandez | | Kubuyekezwe ngomhla ka- 25/03/2022 22:40 | General, Izibuyekezo
IMPILO inomndeni wamarobhothi vacuum cleaner nezinye izinhlobo zamadivayisi aklanyelwe ukusisiza ngemisebenzi yasekhaya okuthi, ngenxa yokukhiqiza nokusebenza kahle kwazo, zibe indinganiso yemboni, ireferensi enhle uma ufuna ubudlelwano phakathi kwekhwalithi nekhwalithi. intengo.
Kungenzeka kanjani ngenye indlela, Kungaba kanjani ngenye indlela, sikulethela ukuhlaziywa okujulile kwe-ILIFE A11 entsha, isicoci se-robot vacuum esinezici eziphezulu kanye nenani elilinganiselwe. Zitholele nathi zonke izici zale ILIFE A11 nokuthi kungani ibekwe njengenye indlela ethakazelisa kakhulu emakethe.
1 Idizayini nezinto zokwakha: Ekuphakameni kweprimiyamu
3 Izindlela zokuhlanza kanye nesistimu ye-2-in-1
Idizayini nezinto zokwakha: Ekuphakameni kweprimiyamu
Ngokuqondene nomklamo, i-ILIFE inqume ukuqhubeka nokugcina amaphethini ayo okuklama, okuyilawo abelwe iningi lamadivayisi alolu hlobo. Kulokhu sibhekene nedivaysi ye 350 x 350 x 94,5 millimeters ngesisindo esiphelele esingaphezu kwamakhilogremu angu-3,5, ngaphakathi kwamazinga emboni.
Engxenyeni engezansi, kunamasondo amabili ane-cushioning, isondo le-multidirectional ngaphambili kanye ne-silicone roller ehlanganisiwe namabhulashi enayiloni ukuze anikeze ukuhlanzwa okuphelele kuzo zonke izinhlobo zezindawo. Ingxenye engemuva yesistimu yokuhlanganisa i-mop kanye nebhulashi elilodwa elizungezayo endaweni engenhla kwesokunxele. Okungaphezu kokwanele.
Ingabe unentshisekelo yokuthenga i-ILIFE A11? manje ungakwazi thola intengo engcono kakhulu kusuka lapha
Phezulu sinenzwa ye-LiDAR elawula idivayisi, izinkinobho ezimbili zokuthi ON/OFF bese sibuyela esiteshini sokushaja nendawo emnyama yepiyano ezojabulisa abalandeli bothuli nezigxivizo zeminwe. Akukho ukugqama ngale kwalokho isistimu yayo yokushaja engavamile.
Empumalanga, kude nokuba nezikhonkwane esisekelweni sedivayisi, itholakala ngaphambili enezindawo ezimbili ezinde zensimbi ezizoqondana nezilingana nazo kusisekelo sokushaja, ezixhunywe kumandla kagesi. Angazi umthelela lokhu okungase kube nawo ezingeni lengozi kagesi, ngokweqiniso, ngikhetha izikhonkwane zakudala ezitholakala phansi kwedivayisi.
Le ILIFE A11 inesitifiketi se-ROHS kanye namandla okudonsa afinyelela phezulu I-4.000 Pa kuye ngemodi yokuhlanza esiyikhethile. Ukwenza lokhu, ifakwe ibhethri elingu-5.200 mAh elisinikeza ukuhlanzwa cishe imizuzu eyi-180. ngemodi yokudonsa eyonga kakhulu. Asikwazanga ukuqinisekisa lokhu okwedlulele ngoba ubukhulu bendlu esetshenziselwa ukubuyekezwa buncane kakhulu kumakhono okuhlanza e-ILIFE A11, okungukuthi, asikwazanga ukukhipha ngaphezu kwe-50% yebhethri yayo.
Sinesistimu yokwenza imephu enezindawo eziningi
Inobuchwepheshe I-LiDAR 2.0 okwenza ukumepha okuthakazelisayo nokusheshayo, ukuthola cishe 3.000 amasampula ngomzuzwana ngebanga eliphakeme lamamitha ayi-8. I-algorithm ye-CV-Slam ibonise imiphumela emihle ekuhlaziyeni okwenziwayo, izithiyo zokudweba njengemibhede, osofa ngisho namatafula kahle. Njengokuhlanzwa kwesibili, kuthuthukisa kakhulu ukusebenza futhi kusheshise inqubo ngendlela yokuzimela, into ehlonishwa kakhulu phansi, lapho idivayisi ingeke ishiywe emishini yayo.
Izindlela zokuhlanza kanye nesistimu ye-2-in-1
Sigqamisa iqiniso lokuthi i-ILIFE iqinisekisa ukuthi kumodeli ye-A11 sinesistimu yeqiniso yokukhuhla kanye ne-vacuum yangempela. Nakuba lokhu kuyiqiniso okufanele sikucacise, sinalo ithange elilodwa lamanzi nokungcola, 500ml imfucumfucu futhi kuphela (kodwa okwanele) 200 amanzi. Kulokhu, kuyamangaza ukuthi inesistimu "yokukhuhla" elingisa ukuvocavoca okwenziwa ngesandla ngokunyakaza kancane, lokhu kuyenza isebenze kahle kakhudlwana futhi igweme ukugqwala. Kodwa-ke, njengoba ngivame ukusho, lawa ma-mops aklanyelwe ukunikeza ukuthinta ama-parquet noma amapulangwe aphansi, futhi ahambisana kabi ikakhulukazi nephansi le-ceramic lapho eshiya khona inqwaba yamamaki amanzi.
I-tank yokungcola: 500ml
I-Mix Tank: 300ml + 200ml
Iyakwazi ukumopha kanye nokuhlanza ngasikhathi sinye, sizokulungisa lokho ngohlelo lwayo lokusebenza lweselula. Kulokhu, Kumahhala kukho kokubili i-Android ne-iOS singakwazi ukuvumelanisa i-ILIFE A11 futhi siyixhume ne-Alexa, Umsizi obonakalayo we-Amazon uzothobela imiyalo yethu enembile mayelana nemisebenzi yokuhlanza.
Ngokulandelayo, sinendlela ekabili yokusebenzisa ngesandla, ngokusebenzisa isilawuli esihlelekayo esifakwe nedivayisi, kanye nesistimu yokulawula ebonakalayo efakwe kuhlelo lokusebenza. Uma sesiskene indlu yonke sizokwazi:
Setha uhlelo lokuhlanza indawo
Setha uhlelo lokuhlanza izindawo
Yenza amashejuli okuhlanza
Yenza ukuhlanza iziphetho noma «Spot Mode»
Phakathi kweminye imisebenzi evamile, njengamathuba okulungisa amandla amathathu okumunca.
Nokho, asinalo ulwazi olunembile ngama-decibel phakathi kwawo lokhu I-ILIFE A11, nokho-ke, akusekude nokuba ngenye yezinto ezithule kakhulu emakethe. Kodwa-ke, inohlelo lokuhlanza "oluthulile" olunciphisa amandla, kodwa ngenxa yezizathu ezisobala, luphinde lunciphise kakhulu umsindo okhishwayo.
Este I-ILIFE A11 ibiza ama-euro angu-369 njengomthetho ojwayelekile, nakuba kukhona okunikezwayo okuningi ku-AliExpress, ngisho nokuthunyelwa okuvela endaweni yangakini, lokho kuzokuvumela ukuthi uyijabulele ngentengo elungiswe kakhulu. Lesi esinye isizathu sokukhumbula ukuthi le ILIFE A11 ingenye egcwele izici ezisezingeni eliphezulu ngentengo emaphakathi nebanga. Uyazi kakade ukuthi amandla okukhuhla njengomthetho ojwayelekile akude nalawo anikezwa amasistimu wokukhuhla ngesandla, kodwa ukuncela, ukuskena kwe-3D namandla ako okumunca akwenza kube inketho ethakazelisa kakhulu.
Isistimu yokushaja eyinqaba
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » I-ILIFE A11, enye indlela enezici eziningi kanye nenani elihle [Buyekeza]